Ogaden News Agency (ONA) – Xukunka Wayaane/TPLF Wuxuu Noqday Midkii ugu Dhibaatada Badnaa Ogadenya, Sabab? – Noora Afgaab
Dad aan ka yareyn 100 qof oo meela kala duwan jooga, dhamaantoodna soo arkay xukunkii Xayle Salaase iyo midkii Mingestu, hadana la nool xukunka TPLF ee ka taliya dalka Itobiya, ayaan weydiiyay su’aasha ah; Intii xukun idin soo maray midkee idiinku dhibaata badnaa?. Gabi ahaantood waxay isku raaceen iyagoon iska warqabin in nimanka hadda ka taliya Itobiya wax la mid ah oo ka anshax xun ama ka cadawsan aanay waligood arkin. Waxay yidhaahdeen dhibaatada loo gaystay shacabka Somalida Ogadenya sanadihii lasoo dhaafay waligeen nama soo marin. Qaar ka mid ah odayaashaa ayaa waxay yidhaahdeen waagii la jabiyay Sayid Maxamad iyo Daraawiishtii ayaa waxaa nasoo martay saman loo bixiyay –Gambiyadii- oo u dhiganta midda maanta taagan. Maxay tahay sababtu? Maxayse ku kala duwan yihiin xukuumadihii hore ee qawmiyadda Amxaarada ay hogaaminayeen iyo xukuumadda maanta ka talisa Itobiya ee qawmiyadda Tigreega ay hogaaminayaan?
Ugu horeyn labadan qawmiyad, Amxaarada iyo Tigreega waxaa la’isku dhahaa Xabasha (Abyssinia), waxayna ahaayeen labada qawmiyadood ee boqortooyada Xabashida soo asaasay. Boqolaalkii sanee ugu dambeeyay waxaa xukunka gacanta ku hayay Amxaarada oo hogaaminayay boqortooyada Itobiya, Tigreegana waxay ahaayeen shacab beeralay ah oo lagu shaqaysto, la dhiigmiirto, cashuur iyo gibir xad-dhaaf ah laga qaado, madaxa laga qaraaco, ciidanna u ah boqortooyada. Dhibaatadii lagu hayay waxay keentay inay noqdaan shacab cuqdad qaba oy aaminay is-liidit (inferiority complex), isu-haystay inay ka hooseeyaan Amxaarada gaar ahaan. waxaa sidaa yidhi Safiir David Shinn, markuu ka hadlayay dagaalka Ertreeya iyo TPLF. Shacab raadinaya aar-goosi aan joogsi lahayn iyo is-muujin ayay ahaayeen Tigreega markay gacanta ku dhigeen xukunka Itobiya.
Arin noocanoo kale ah waxay ka dhacday Somaliya. Markii la riday xukunkii Maxamad Siyad Barre (AUN), ururkii USC ee ka midka ahaa isbahaysigii riday xukunkaa ee ka koobnaa USC, SPM iyo SNM, meeshii laga rabay inuu dawlada dhiso, waxaa ka xoog badiyay cuqdadii ay qabeen ee is-liididda ahayd, waxayna ku dhaqaaqeen aar-goosi iyo is-muujin, taasoo keentay inay dhanwalba xabbada u ridaan oo aanay cidna badbadinin. Uruka TPLF iyo qawmiyadda Tigreega waxba kama duwanaadeen USC, hadaanay dawladaha reer Galbeedka, gaar ahaan Mareykanka majaraha u qabanin oo aanay u tilmaamin inay dawladda qabsadaan oo Itobiyoo idil u taliyaan, intay burburin lahaayeen. Taladaa ayay qaateen, ka dibna awoodii dawladda iyagoo gacanta ku haya ayay aargoosi kula dhaqmeen qowmiyadii Amxaarada iyo qofkasta oo diiday xukunkooda. Xaqiiqada marka lasoo ururiyo waa midaa.
Shacabka Ogadenya laba khalad oo aqoon-darro u gaysay ayay galeen markuu dhacay xukunkii Mengisto. Khaladka koobaad wuxuu ahaa, inay cadaawadda u dhexeysa iyaga iyo Itobiya u haysteen inay ahayd mid u dhaxaysa iyaga iyo Amxaaro oo kali ah. Arintaasi waxay keentay in markii la riday xukunkii Mengistu oo ugu dambeeyay Boqor/Madaweyne Amxaaro inay aad ugu farxeen aadna loogu soo dhaweeyay Ogadenya oo xoolo loo qalay maleesiyaadkii Wayaanaha ee loosoo diray inay la wareegaan Ogadenya. Sababtuna waxay ahayd iyadoo in yar oo kali ah ay fahamsanaayeen inay Itobiya ka kooban tahay qawmiyada kale duwan oy jiraan qaar ka xun kana cadawsan Amxaarada. Khaladka labaad wuxuu ahaa, ciyaartay firimbiga u hayeen Wayaanaha oo la dhex booday, ciyaartaasoo loogu magac daray; Xisbi Furo oo Doorashada Isu-diyaari. Muddo sanad gudaheed ah ayay xisbayadii laga furay Jigjiga kor u dhaafeen xisbiyadii ka furnaa Moqadishu 1967kii.
Waxaa intaaba ka darnaa ciidankii Mengisto ee ka cararay xeryahoodii oon laga faa’idaysan, oo waliba meelaha qaarkood loo hayay oo waardiye laga sii qabtay hubkii iyo gawaadhidii dhex yiilay si loogu wareejiyo dawladda iman doonta.
Aqoondaradaa inaga haysatay qawmiyadaha Itobiya, gaar ahaan Wayaanaha iyo ayaandaradii inugu dhacday oon sii sharxi doono waxay na kalifeen in aan ku weyno naf iyo maal aan horey inoo soo marin iyadoo kale. la soco qormada dambe.